EX - ABSDF: February 2014
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပြီးမှသာ သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတမှစပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ဖြစ်ခွင့်ရှိသည် ဟူသော မူတစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်မည်ဟု
ကြားလိုက်၊ ဖတ်လိုက်ရသည်။ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရပြီး မှသာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် ရာထူးကြီးများ ရမည်ဆိုသည့်သဘော။ ထိုမူသာ အတည်ဖြစ်သွားလျှင် ရှင်နည်းရာ အဂ္ဂလူထွက်ကိန်း ဆိုက်လိမ့်မည်။
» ကတုံးနဲ့လူ သတိထား...
တကယ်တော့ !! ခေါင်းငုံ့နေတာ ဦးညွှတ်ချင်လို့မဟုတ်ပါ။ အရာရာတို့၌ ခံပြင်းစွာ နာကျည်းစွာ ဒေါသဖြစ်စွာ အရှုံး မမည် သော အရှုံး သံသရာ မှာ သူတို့ ကူးခတ်ဆဲ ငွေကြေးချမ်းသာသူများ ပိုချမ်းသာပြီး ဆင်းရဲသူများ ပိုဆင်းရဲလာကြောင်း လွှတ်တော်ကော်မတီ အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားကြောင်း သိရှိရပါသည် ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမခြောက်လအတွင်း အစိုးရ၏ တစ်နှစ်လုံး စီမံချက်များအပေါ်
၃၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိပကတိ အခြေအနေမှာ ငွေကြေး ချမ်းသာသူများ ပို၍ချမ်းသာလာပြီး ဆင်းရဲသူများ ပို၍ဆင်းရဲလာကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တစ်နှစ်လျှင် သတို့သမီး သန်း ၂၀ ခန့်လိုအပ်နေသောနိုင်ငံသို့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသူများ.. လျိုအလျို လူမှောင်ခိုကူးခံကြရ သည်။ Read more »
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း အစိုးရနှုန်းထားအတိုင်း လျှပ်စစ်မီတာခ ရရှိရေး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည် တရုတ်အမျိုးသားနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီးငယ် ပျောက်ဆုံးနေ
Job Seekers Journal vol.2,No.38 စိတ်စွမ်းအားဖြင့် ဦးဆောင်ခြင်း
ဟာဂျူလီ ကသာ's photo.
Miss Supranational Myanmar ခင်ဝင့်ဝါကို ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး အလှမယ် Website များဖြစ်သည့် Global Beauties နှင့် Missosologyတို့ မှ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အလှမယ် စာရင်းဝင် အဖြစ် ဆုများချီးမြှင့်ကြမည်ဟု သိရသည်။
သူ့အားဝေဖန်သူများက သူ့ခေတ်သူ့အခါက ထုတ်လေ့ရှိသော မေးခွန်းတခုမှာ “ဗိုလ်ချုပ်တို့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို ပေါင်းခဲ့သင့်သလား” တနည်း “ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့ အကူအညီကို ယူခဲ့သင့်သလား” ပင် ဖြစ်သည်။
တရုတ် မှောင်ခို ဈေးကွက် မှာ တန်ဖိုး မြင့်တက် လာတဲ့ လူ့ခန္ဒာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ... အရှိန် အဟုန်နဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ လူသား မှောင်ခို ဈေးကွက်
JOB seekers Journal Job Seekers Journal vol.2,no.37
ေ လောကကြီးကို ဦးဆောင်နေတာ ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်က သာလျှင် တစ်လောကလုံးကို ဦးဆောင်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် က ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
စိတ်မှာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေ၊ သတ်္တိတွေ အများ ကြီးရှိပါတယ်။ စိတ္တ (စိတ်)ဆိုတာဟာ ထူးခြားဆန်းကြယ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ Read more »
Tin Lay Zaw with ကိုသောင်း ပုလဲမြေ and 48 others
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂန္ထဝင်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်၏ မြေး အေးနေဝင်းနှင့် အမေးအဖြေ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်တွင် ဦးနေဝင်း၏ ထို မြေးများသည် ထိုစဉ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချ ဖယ်ရှားရန် ကြံစည်မှုဖြင့် သေဒဏ်ချ မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ရဲဘက်စခန်းတွင် အကျဉ်းသားများအား မတရားညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ရုံမက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုများအား ဗြောင်ကျကျလုပ်ဆောင်နေ
၁၉၉၉ခုနှစ်မှာ နယူးယောက်မြို့က ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံသစ်စီမံကိန်း တရားဝင်အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ အထူးဧည့်သည်တော်တွေထဲမှာ အဲဒီအချိန်က အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်နေတဲ့
ကလင်တန်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ဦးက ဒီစီမံကိန်းကို အင်တိုက်အားတိုက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ နယူးယောက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် Moynihanဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ အလွန် နိုင်ငံရေးဟောစာတမ်း MyanmarDaily.net shared Ko Nyi's photo.
သရ၀ဏ်(ပြည်) ကျွန်တော်သည် ဗေဒင်ဆရာလည်းမဟုတ် ၊ ဘိုးတော်လည်းမဟုတ် ၊ အကြားအမြင်ရသူလည်းမဟုတ်ပါ ။ သို.သော် တိရိစ္ဆာန်များတွင် မိုးရွာမည်
ရေကြီးမည် ၊ငလျင်လှုပ်မည်ကိုကြိုတင်သိတတ်သော မွေးပါဥာဏ် ( Instinct ) ရှိသကဲ.သို.လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၄၆)နှစ်ခန်.နေထိုင်လာခဲ.ပြီးသော နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနှင်.လည်းကောင်း ၊